Tobia 11 - Ny Baiboly
Tobia toko 11
Tafaverina Tobia - Nahiratra indray rainy - Tonga Sarà.
1Nony niverina izy ireo, ka tonga tao Karana, tanàna eo amin'ny fisasahan-dàlana mankany Niniva, tamin'ny andro faharaika ambin'ny folo, 2dia hoy ity anjely: Ry Tobia rahalahiko, fantatrao ny toetra nandaozanao an-drainao teo; 3ka raha sitrakao andeha isika hialoha, fa avelao ny ankizilahy no handeha kelikely isan'andro ato aoriana, miaraka amin'ivadinao sy ireto biby fiompinao. 4Nankasitrahan'i Tobia izany hevitra izany, ka hoy Rafaela taminy: Mitondrà eo aminao amin'ny aferon-kazandrano, fa misy hilanao an'izany; dia naka tamin'izany afero izany Tobia, ary niainga izy ireo.
5Tamin'izany Anna, nandeha isan'andro, nipetraka teo amoron-dalana, tamin'izao havoana kely izao, fa mahatazan-davitra eo. 6Raha ilay nitily ny hihavian-janany iny indrindra izy dia indry izy tazany tamy mbola lavitra, ka rahefa fantany dia lasa izy nihazakazaka nilaza tamin'ny lahy nanao hoe: Indry tamy ny zanakao.
7Tobia izany, dia nilazan-dRafaela hoe: Rahefa tonga any an-trano hianao, ny Tompo Andriamanitrao no itsaohy miaraka amin'izay dia misaora azy, vao manatona an-drainao hianao sy manoroka azy; 8ary hosory faingana amin'ilay aferon-kazandrano nentinao ny masony, satria fantaro fa hisokatra eo no ho eo ny masony ka hahita ny hazavan'ny lanitra ny rainao, sy ho feno hafaliana amin'ny fahitana anao.
9Tamin'izay ilay alika nanaraka azy tany am-pivahiniana, nihazakazaka nialoha azy ireo toa hilaza ny vaovao, nanafosafo tamin'ny rambony, an-kafaliana fatratra. 10Dia nitsangana ity ray jamba, ka rafitra nihazakazaka, fa tafintohina ny tongony ka noraisin'ny mpanompo anankiray tamin'ny tànany izy handeha hitsena an-janany. 11Nofihininy tamin'ny tànany sy nohorokorohany izy, ary torak'izany koa no nataon'ny vadiny, dia samy latsa-dranomason-kafaliana izy mivady. 12Nony avy nitsaoka sy nisaotra an'Andriamanitra izy ireo, dia nipetraka. 13Niaraka tamin'izay, nalain'i Tobia ny aferon-kazandrano, ka nohosorany tamin'io ny mason-drainy. 14Niandry sahabo ho antsasak'adiny izy, dia nisy zavatra fotsifotsy hoatra ny hoditr'atody nanomboka niala avy ao amin'ny masony. 15Noraisin'i Tobia izay, nosintoniny hiala amin'ny mason-drainy, dia nahiratra niaraka tamin'izay izy. 16Koa nisaotra an'Andriamanitra izy ireo, dia izy sy ny vadiny mbamin'izay rehetra nahalala azy. 17Hoy Tobia: Misaotra anao aho, ry Tompo Andriamanitr'Israely, fa nofaizinao aho, dia nositraninao indray; ary indro mahita an'i Tobia zanako aho.
18Hafitoana taorian'izany, dia tonga koa Sarà sy ny mpanompony rehetra samy salama tsara, mbamin'ny biby fiompiny aman-drameva ary ny vola rehetra tamin'ny fanambadiany, sy ilay naverin'i Gabelosa. 19Notantarain'i Tobia tamin-drainy aman-dreniny ny soa rehetra natolotr'Andriamanitra azy, tamin'ny nataon'ity lehilahy nitari-dàlana azy. 20Akiora sy Nabata havan'i Tobia koa tonga namangy azy tamin-kafaliana lehibe, sy niarahaba azy tamin'ny soa rehetra nataon'Andriamanitra taminy. 21Ka niara-nihinana sy nirobiroby fatratra izy ireo, nandritra ny hafitoana. >
Powered by CI-CMS Version 2.0.0.0 | Page rendered in 0.0491 seconds